Information for Myanmar about Islam: အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ ရှင်းလင်းချက် (၁)
ရောင်ခြည်ဦး (ဘာသာတိုင်းအတွက် အလယ်လူ) ရေးသားတင်ပြထားသော ပိုတ်စ့်များကို အရင် တင်ပြအပ်ပါ တယ်…
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ ( အပိုင်း ၂ )
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ ( အပိုင်း ၃ )
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ ( အပိုင်း ၄ )
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ ( အပိုင်း ၅ )
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ ( အပိုင်း ၆ )
ဘုံပျောက်မှာစိုးကြောက်မိရှာ ( အပိုင်း ၇ )
မူရင်းလင့်ခ်တွင် အထက်ပါအပိုင်းအလိုက် ကလစ်နှိပ်ကာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်….
အထက်ပါဖော်ပြပါ (၇) ပိုင်းလုံးကို ဖော်ပြရသော်-
မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုကြည့်ပြီး သတိသံဝေဂရကြစေရန် ဤဆောင်းပါးကို မူရင်းအတိုင်း တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် မုန်းတီးမှု၏ အကျိုးတရားများကို ကောင်းစွာသိနားလည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မုန်း တီးမှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိတို့၏ဘဝကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသော သူတို့ကို မြတ်စွာဘုရား မြင်တွေ့ တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် '' မုန်းတီးမှုကြောင့် မုန်းတီးမှုသည် မပြီးဆုံးနိုင် '' '' သင်အမုန်းပွါးလေလေ အခြေအနေပိုဆိုးရွားလေလေ'' ဖြစ်ကြောင်းကို ပြတ်ပြတ်သားသားမိန့်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။
သင်ကကျွန်ုပ်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်ကသင့်ကိုမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်က သင့်ကိုပိုမုန်းလာ၏။ ဤသို့ဖြင့် မုန်းတီးမှုက တဆင့် ဆင့်တိုးပွါးလာရာ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အချင်းချင်းမုန်းတီးမှုဟူသော မီးလောင်တိုက်တွင် လောင် မြိုက်ခြင်းခံရသည်အထိဖြစ်၏။ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ တဘက်ဘက်က အမုန်းပွါးမှုကို ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရား မြင်တော်မူ၏။
တဘက်ဘက်ကဖြစ်စေသို့မဟုတ် နှစ်ဘက်စလုံးကဖြစ်စေ၊ မုန်းတီးမှုကိုမိတ်ဖြစ်မှုနှင့် သို့မဟုတ် ချစ်ခင်မှုနှင့် အောင်နိုင်အောင် မကြိုးစားလျှင် ဤမုန်းတီးမှုအစဉ်အတန်းသည် မည်သည့်အခါမျှ ဆုံးခန်းတိုင်မည် မဟုတ် ချေ။ (ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်၊ ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် ခေတ်သစ်ဘဝ၊ စာမျက်နှာ ၅၅-၅၆)
ကျွန်တော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းအားဖြင့် နိုင်ငံ ဝန် ထမ်းတာဝန်ကို ၃၅ နှစ်မျှ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ကံအားလျှော်စွာ ယင်းနိုင်ငံများသည် အများ အားဖြင့် မူစလင်များရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်နေပါသည်။ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီဂျစ် ပြည်၊ ယူဂိုစလပ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများသို့ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ယင်းဒေသရှိ မူစလင် များအကြောင်းကို အနီးကပ် လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ များမကြာမီက ဖြန့်ချီနေသော '' မျိုးပျောက် မှာစိုး ကြောက်ရ'' အမည်ရှိ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေး (ဝါ) ကုလားမူစလင်ဆန့်ကျင်စာတမ်းတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဤစာတမ်းပါ အချက်အလက်များကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ဖြန့်ချီနေသော အာရိ ယာစမာခ်ျ (ခေါ်) အာရိယာသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ R.S.S ၊ ဂျန်နဆင်းစသည်ဖြင့် ဟိန္ဒူတယူသန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စာ တမ်းပါ အချက်အလက်များ ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၂၀ ပြည့် နှစ်လောက်ကစ၍ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်လာခဲ့ရာ အိန္ဒိယတိုက်နယ်ဒေသတွင် ပါကစ္စ တန်နှင့် အိန္ဒိယဟူ၍ နှစ်နိုင်ငံ ပေါ်ထွန်းလာခြင်းသည်သာ အမှတ်ထင်ခဲ့ရသည်။ မူစလင်လူမျိုးများ ရှိရာဒေသ သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဖြစ် ခွဲထွက်သွားသော်လည်း ယနေ့အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မူစလင်တို့ အင်အားကား ကြီးထွားဆဲပင်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်လိုသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မူစလင်တို့နှင့် အပေးအယူ ပြုလုပ်ရလေ့ရှိ သည်။ အရင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော V.I.P ဟိန္ဒူအစွန်းထွက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည်ပင် အာဏာရရှိရန် သူတို့၏ မူစလင်ဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများနှင့် ခံယူချက်စောင်ပုဒ်များကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ရသည်။
'’မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ'' စာတမ်းတွင် ပါဝင်သကဲ့သို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဟိန္ဒူများသည် မူစလင်များကို မုန်း တီးသည်။ အတိတ်က ခဲမှန်ဖူးသည်ဟူသော ရေးသားချက်ကား လုံးဝပင်မှားယွင်းနေသော ဖော်ပြချက် ဖြစ်နေ သည်။ တခါတရံ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းမှအပ အိန္ဒိယသားတို့သည် တူညီသော အမျိုး သားရေး စိတ်ဓါတ် ထားရှိကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
တခါတရံတွင်မူ အိန္ဒိယ၏ ရိုးရာဓလေ့များ၊ အနုပညာများကို မူဆလင်တို့က ပိုမိုစွဲမြဲစွာ ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့များသည် (မြန်မာစစ်အစိုးရလို) ဘာသာရေးကို သူတို့ အာဏာရရှိရေးအတွက် အသုံးချလေ့ရှိသည်။ အယုဒ္ဓယဗလီ ကျောင်းမြေနေရာသည် ဟိန္ဒူဘုရားပွင့်ရာ နေရာ ဖြစ်သည်ဟု အတိုက်အခံတို့က နိုင်ငံရေးအရအသုံးချခဲ့သည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဟိန္ဒူအစွန်းထွက်များက အယုဒ္ဓယဗလီကျောင်းကို ဝင်ရောက် ဖျက် ဆီးသိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းမြောက်များစွာ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ယင်း အယုဒ္ဓယဗလီကိစ္စကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ရူပီငွေကုဋေပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ဆုံးရှုံးပြီး၊ လူပေါင်း တစ်သိန်း နီးပါး သေခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ဖက် မူဆလင်နိုင်ငံများဝယ် ဈေးကွက်လက်လွတ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌သာမဟုတ် ဥရာပတိုက်ရှိ ဗြိတိန်နိုင်ငံအထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မူဆလင် တို့သည် သူတို့ဘာသာဝင်များကို ကမ္ဘာ၏ ဘယ်အရပ်ဒေသတွင်မဆို ထိခဲ့လျှင် သူတို့ဘက်က တန်ပြန်ကလဲ့ စားချေသည့် အလေ့ရှိသည်။
၁၉၈၇ ဝန်းကျင်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ညောင်တုန်းမြို့တွင် ဗလီဘုရားကျောင်းနှင့် မူဆလင်တို့၏ အိမ်ယာများ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ကြရသည်ကို အကြောင်းပြု၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဗောရောဗုဒ္ဓောဘုရားကျောင်း၏ အရံစေတီ တစ် ဆူကို ဖျက်ခဲ့သည်တို့ကို မမေ့အပ်ပေ။
၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗလီဘုရားကျောင်းများကို မြန်မာတို့မှ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည့် သတင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့မူစလင်တို့ မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ တာလီဘန်တို့က သူတို့နိုင်ငံရှိ တောင်ကြီးထက်တွင် ထုလုပ်ထားသည့် ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓဘုရားရုပ်ထုကို ဖောက်ခွဲဖြစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သေး သည်။ ဤကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂယူနက်စကိုက မေတ္တာရပ်ခံမှ သူတို့လက်လျော့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဗုဒ္ဓ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး အများအပြားသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ပါကိစ္စတန်နိုင်ငံတွင် အများအပြား ရှိ နေသည်။
သူတို့သည် ယင်းအထိမ်းအမှတ်များကို သူတို့၏ရှေ့ဟောင်း အမွေအနှစ်အဖြစ် ဂုဏ်ယူဖော်ပြလေ့ ရှိသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် တက္ကသီလာ အပါအဝင် ယင်းရှေးဟောင်းဂန္ဓာရ ယဉ်ကျေးမှုကို အကြောင်းပြု၍ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များထံမှ နိုင်ငံခြားငွေအများအပြား သန်းချီရရှိနေသည်။
ကျွန်တော် မူစလင်နိုင်ငံတွင် မူစလင်တို့စပ်ကြားတွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်က ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သော ပါရဂူ များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါသည်။ သူတို့အဆိုအရ မူစလင်တဦးသည် အခြားဘာသာဝင်တဦးကို တနည်းနည်းဖြင့် ဒုက္ခပေးခဲ့လျှင် လည်းကောင်း၊ အခြားဘာသာတို့၏ ဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ သူ တို့၏ အလ္လာဟ်ဘုရားက အပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသူသည် ငရဲကျမည့်အကြောင်း သူတို့ ဘုရားစာ ကိုရမ်ကျမ်းတွင် ပညတ်ထားကြောင်းပြောပြကြသည်။ ကျွန်တော်ကလည်းအတိတ်ကာလက မူဆလင်တို့မှာ ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပြောပြရာ ထိုပါရဂူပညာရှင်တို့က အကိုးအကားဖြင့် အောက်ပါ အ တိုင်း ယင်းစွပ်စွဲချက်များကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
BC6ရာစုခေတ်မှစ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘာသာကိုးကွယ်မှုသမိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာသည် သူ၏ဇာတိမြေတွင် နှစ် ပေါင်း ၁၆၀၀ ခန့်တိတိ တည်တံ့ခဲ့သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁ မှ ၈ ရာစုနှစ်များတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာသည် အိန္ဒိယ မြေမှလုံးဝပြောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။ ဤသို့ပျက်သုဉ်းရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်း သုံးခုမှာ -
ရှင်ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့သော ဘီစီ ၅ ရာစု ကုန်လုနီးကာလအတွင်း ရှင်ဗုဒ္ဓထူထောင်ခဲ့သော ဓမ္မဝါဒီတို့ အား ကောင်းနေသည်ဖြစ်၍ တလုံးတစည်းတည်း ဂုဏ်ရောင်ထွန်းပြောင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် ဒုတိယသင်္ဂါယနါတင်ပွဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) နှင့် တတိယ သင်္ဂါယနါတင်ပွဲ (ဘီစီ ၄ ရာစု) တို့ ကျင်းပချိန်တွင် ဗုဒ္ဓသံဃအဖွဲ့သည် ဂိုဏ်းကွဲ (၁၈) ခုအထိကွဲခဲ့ရသည်။ မူလပင်မအုပ်စုကြီးအသွင်မှ ထေရဝါဒဂိုဏ်း၊ သဗ္ပတ္တိဝါဒဂိုဏ်း၊ မဟာသံယိတဂိုဏ်း ကြီးများအဖြစ် အပြိုင်အဆိုင် နယ်ဖြန့်၍ သာသနာပြုခဲ့သည်။ ဤခေတ်တွင် သဗ္ပတ္တိဝါဒဂိုဏ်းနှင့် သံယိတဂိုဏ်း တို့၏ အယူဝါဒသည် မူလထေရဝါဒဂိုဏ်းနှင့် သိသိသာသာကွဲပြားသွား၍ အများကြိုက်ဘာသာရေးအသွင် ကူး ပြောင်း ပုံပျက်သွားကာ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဟူ၍ တသီးတခြားထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဤသို့ ဗုဒ္ဓ၏ သံဃာ့ဂိုဏ်းသည် အတွင်းပြိုကွဲမှုများ အထပ်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အင်အား ဆုတ်ယုတ် သွားခဲ့သည်။
(၁) သံဃာဂိုဏ်းအတွင်း ဂိုဏ်းငယ်အသီးသီး ခွဲထွက်ခဲ့၍ စည်းလုံးသိပ်သီးမှု ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။
(၂) ဗုဒ္ဓမတိုင်ခင်က အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အထင်အရှားရှိနေသော ဟိန္ဒူဝါဒ၊ ဗြဟ္မာဏဝါဒနှင့် ဂျိန်းဝါဒတို့၏ ထိုးနှက် မှုကို အလူးအလှဲ ခံရခြင်း၊
ဘီစီ ၃ ရာစုအတွင်း မောရိယလက်နက်နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဧကရာဇ်ဘုရင် အာသောကမင်းကြီး (ဘီစီ ၂၇၃-၂၃၂ ခန့်) သည် ဗုဒ္ဓသာသနာကို အလွန်အကျူးချီးမြှောက်ခဲ့ပြီး၊ မောရိယနိုင်ငံတော် တစ်ဝန်းလုံး ဗုဒ္ဓသာ သနာနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒပြန့်ပွါးရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဤခေတ်သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပြီးသည့်နောက် ဗုဒ္ဓသာသနာ အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ခဲ့သော ခေတ်ဟုဆိုရပါမည်။ (သို့သော် အာ သောကမင်းကြီးကို ဆက်ခံခဲ့သော သူ၏မြေးဖြစ်သော မင်းများသည် ဂျိန်းဝါဒီများဖြစ်ကြ၍ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ချီးမြှောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မောရိယမင်းဆက်ပျက်သုဉ်း၍ သုင်္ဂမင်းဆက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော ပုရ်ှမိတြ ဟိန္ဒူမင်း (ဘီစီ ၁၅၀ - ၁၈၅) သည် ဘီစီ ၂ ရာစု ကုန်လုနီးအတွင်း ဗုဒ္ဓဝါဒီအကြီးအကျယ်နှိပ်ကွပ် ညှဉ်းပမ်းခဲ့သည်။ ရဟန်းကျောင်းများ၊ စေတီပုထိုးများ၊ သာသနိက အဆောက်အအုံများကိုလည်း မီးတိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓရဟန်းတော် အများအပြားတို့သည် အိန္ဒိယပြည် အလယ်ပိုင်းဒေသမှ ယခု ပါကစ္စတန်ရှိရာ ပန်ဂျပ်နယ်မြေကို ပြေးဝင်ခိုလှုံခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင် ခရစ်နှစ် ၇ ရာစုတွင် အုပ်စိုးခဲ့သော ဂုပ်တာနန်းဆက်မှ သလက်မင်းကလည်း ဟိန္ဒူဝါဒကို မြှောက် စားလို၍ ဗုဒ္ဓဝါဒီများနှင့် သာသနိက ကဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးရုံသာမက မဟာဗောဓိပင်ကိုပါ အမြစ်မှ တူးဖြတ် ဖြိုလှဲချခဲ့သည်။ တရုတ်ရဟန်းကြီး ဖာတီယန်အစ်စင်နှင့် ဟိယန်ဆင်တို့၏ မှတ်တမ်းများအရ ဗုဒ္ဓသာ သနာသည် ကျယ်ပြန့် ခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘဲ၊ အိန္ဒိယ အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ဘက် ဘင်္ဂလားနယ်၊ တောင်ဖက် ဒက်ခန်ကုန်းမြင့်တဝိုက်၌သာ ကြိုကြားကြိုကြားသာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း ဆိုထားသည်။
(၃) ခရစ်သက္ကရာဇ် ၃ ရာစုအတွင်းက ကသ္မီရနယ်ရှင် ဟန်မင်းဆက်မှ ဟိန္ဒူဘုရင် မဟိရကုလသည် ယနေ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားသော ဂန္ဓာရတိုင်းကို မွှေနှောက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ ၌ ဗုဒ္ဓဝါဒီအများအပြားကို သုတ်သင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်များသည် သမိုင်း၏ဖျောက်ဖျက်မရနိုင်သော အမှန် တရားများဖြစ်သည်။ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အရှေ့တိုင်းဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာပေစဉ်များတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါ သည်။)
မူစလင်တမာန်တော် မိုဟာမက်သည် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၅၇၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မိုဟာမက် မမွေးခင်ကပင် ပျောက်ပျက်နေပြီးဖြစ်သည်။ မိုဟာမက် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ လောက်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာသည် အိန္ဒိယသို့ ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၂ ရာစုအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက်မွှေနှောက်သော အာဖဂန်တို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သည်. အိန္ဒိယမှပျောက်ကွယ်ရသည်ဟု ဟိန္ဒူသမိုင်းပညာရှင်တို့က ဆိုကြသည်။ ဖော်ပြပါ အာဖဂန်စစ်သွေး ကြွများသည် မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်ပြီး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် စပ်လျင်း၍ သိမြင်နားလည်သူ မဟုတ်ပါ။ အစဦးပိုင်းတွင် အိန္ဒိယသို့ရောက်ခဲ့သော အာရပ်တို့ကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲသားတို့ မင်း မြောက်ခဲ့ရသည်။
အာရပ်မူစလင်တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဆင်းရဲသားများ၊ ဇာတ်နိမ့်များ၊ လယ်ကျွန်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အာရပ်တို့ပြန်သွားပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှ အာဖဂန်တို့က အိန္ဒိယသို့ ဝင် ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အိန္ဒိယတိုက်နယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသောအခါ မည်သည့်ဘာသာ၊ မည်သည့်လူမျိုးဟု သတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ သူခိုးဓါးပြကဲ့သို့ အားလုံးကိုပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု မူစလင်သမိုင်းပညာရှင် တို့ကလည်း ရေးသားထားပါသည်။
မူစလင်သမိုင်းပညာရှင်တို့၏ ဖော်ပြချက်အရ အိန္ဒိယတွင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော မူစလင်ဘုရင်များသည် အစ္စလာမ် ဘာသာကို မည်သို့မျှ ကူညီဖြန့်ချီပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာကို သာသနာပြုခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ ဆူဖီ ဟုခေါ်သော မူစလင်ရသေ့ ဘာဘာကြီးများသာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ထိုမူစလင် သမိုင်းပညာရှင်တို့က ကျွန် တော့အား'' ဒီလိုပြောကြကြေးဆိုရင်၊ ခင်ဗျားတို့ကကော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ဘုရားပုထိုးများကို ဖျက်ဆီးခဲ့တာ ဘာကြောင့်လည်း'' ဟုပြန်လည်၍ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
ယနေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလောင်းဘုရားလက်ထက်က ဗမာတို့ဖျက်ဆီးခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းကန် များကို ထိုင်းလူမျိုးတို့သည် ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ ဗမာတို့၏လက်ချက်ဟု ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ပြသနေ ဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မူစလင်များကို အထူးအရေးပေးခြင်း ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်ရှိ ပတ္တာနီ၊ နာရ သီဝ၊ ယာလာဟူ၍ ပြည်နယ်သုံးခုတွင် မူစလင်များအများစုရှိသည်။ ထိုင်းဘုရင်သည် မူစလင်တို့၏ ဘာသာ ရေးဂိုဏ်းချုပ်ကို တိုက်ရိုက်ခန့်ပေးသည်။ ဂိုဏ်းချုပ်သည် အာဏာအပြည့်အဝရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ကက်ဘိ နက်တွင် ဝန်ကြီး ၃-၄ ဦးမှာ အစဉ်အမြဲ မူစလင်များကို ခန့်လေ့ရှိသည်။ အာရပ် မူစလင်နိုင်ငံတို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အကျိုးရှိနေသည်။ မူစလင်တို့၏ ဘာသာရေးသက္ကသိုလ်မှာ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ခမ်းနားစွာရှိနေ သည်။
ဤကဲ့သို့ပင် ကမ္ဘောဒီးယားတွင်လည်း မူစလင်များကို အရေးပေးခြင်းရှိသည်။ ကွန်မြူနစ် ပိုပေါ့ လက်ထက် တုန်းက မူစလင်များ သိန်းနှင့်ချီ အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းအကြောင်းကို နောက်တက်လာသည့်အစိုးရက ကမ္ဘာ သိအောင် ဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ဤနှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ လူများစုရှိသော နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
ယင်းနှစ်နိုင်ငံထက် ပိုမို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနိုင်ငံကား သီဟိုဠ်ကျွန်း သီရိလင်္ကာပင်ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဆင်ဟာလီစ်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းမှ လာရောက်သူ တမီလ်များသည် ဟိန္ဒူများဖြစ်ကြသည်။ တမီလ်တို့သည် ၃၀ % မျှရှိသည်။ နောက်ထပအစုတစ်စုက မူစလင် များဖြစ်ကြသည်။ ၁၆ % မျှရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အုပ်ချုပ်သူတို့နှင့် တမီလ်ဟိန္ဒူတို့ စပ်ကြားတွင် စစ်ဖြစ်နေ ကြသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ တမီလ်ဟိန္ဒူတို့၏အဖွဲ့က တမီလ်ကျားအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စင်ဟာလစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို ခေါင်းဆောင်မှုပေးသာ ရဟန်းတော်များကို အလွန်ရွံရှာ စက်ဆုပ်မှုရှိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအထိ ရဟန်းတော်များကို ဓါးဖြင့် ကိစ္စတုံးပစ်ခဲ့သည့် သာဓကရှိသလို သီဟိုဠ်ရှိစွယ်တော် မြတ်စေတီကိုပင်လျင် ဗုံးဖြင့်ဖောက်ခဲ့သည်။ သီရိလင်္ကာရှိ မူစလင်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် မဟာမိတ် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်အတူ မူစလင်များမှာလည်း တမီလ်ကျားသူပုန်တို့၏ ထိုးနှက် သတ် ဖြတ်ခြင်းကို အလူးအလဲ ခံနေရရှာသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် မူစလင်များနှင့် အလွန်ရင်းနှီးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို မူစ လင်နိုင်ငံ အများအပြားက ကူညီထောက်ပံ့ လျက်ရှိနေသည်။ ဤဖော်ပြချက်များသည် မျက်မှောက်ခေတ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာများ၏ ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ အဆင့်ဖြင့် ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကိုရီ ယားနိုင်ငံတို့က ဦးစီးခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားသော နိုင်ငံများတွင် ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများ သည် ကြီးမားသော အနေအထားဖြင့် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံများသည် မူဆလင်အများစု ရှိ သော နိုင်ငံများဖြစ်သည်ကို သတိပြုပါ။ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓသာသနိက အဆောက်အအုံများကို
အစိုးရက ဦးစီး၍ ကျကျနန ပြင်ဆင်မွမ်းမံပေးသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ ဗောဓိရာဗုဒ္ဓဘုရားကြီးကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ယူနက်စကို အကူအညီဖြင့် IBM ကွန်ပျူတာစနစ်ကို အသုံးပြုကာ ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ သူတို့နိုင်ငံတွင် ဥပုသ်နေ့ တွင် ရုပ်သံလွှင့်ဂြိုလ်တုမှနေ၍ ဘုန်းတော်ကြီးများ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ဟောကြားသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွား ရောက် သာသနာပြုခွင့် ပြုထားသည်။
နောက်ထပ် အကောင်းဆုံး စံနမူနာအဖြစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံကို လေ့လာစေလိုပါသည်။ ယင်းနိုင်ငံသည် ခရစ်ယန်၊ မူဆလင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ရှင်တို၊ ဂျူး၊ ဟိန္ဒူ၊ ဆစ်ခ်ဟူ၍ ဘာသာပေါင်းစုံ နေထိုင်သော သေးငယ်လှသော ကျွန်း ငယ်လေးတခု ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာဝင်အားလုံး၊ လူမျိုးအားလုံးသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အထူးလေးစားစွာ ဆက်ဆံကြသည် (အချို့ ရွှေမြန်မာတို့၏ စိတ်ဓါတ်နှင့်တော့ အရမ်းကိုကွာပါသည်)။
သူတို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချက်သည်ကား သူတို့နိုင်ငံတိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်းသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ယင်းနိုင်ငံရှိ တရုတ်၊ အန္ဒိယ၊ မလေး စသည်ဖြင့် လူမျိုးအားလုံးသည် မိမိကိုယ်ကို ''ဆင်ကာပူရီယန်'' ဟူ၍ ခေါ် ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားစပ်ကြားတွင် ဂုဏ်ရှိစွာ ဦးမော့နေနိုင်ရခြင်းမှာ တူညီ သော နိုင်ငံချစ်စိတ်ဓါတ်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယနေ့ အာရဗ်နိုင်ငံများတွင် မူဆလင်များအပြင် ခရစ်ယန်များ၊ ဂျူးများ၊ ဟိန္ဒူများလည်း နေထိုင်သည်။ အာရဗ် နိုင်ငံစုတွင် ခရစ်ယန်ဦးရေ စုစုပေါင်း ၇ သန်းကျော်ရှိသည်။ အီဂျစ်ပြည်သား ဘုတရို့စ်ဂါလီ သည် ကုလ္လသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ခရစ်ယန်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဇနီးဖြစ်သူသည် ဂျူးလူမျိုးဖြစ်သည်။ ဤကဲ့ သို့ပင် အီရတ်နိုင်ငံတွင်လည်း ခရစ်ယန်များသည် အရေးပါလှသော အစိုးရဌာနများကို အုပ်ချုပ်ရသည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လွတ်လပ်သော မူဆလင်နိုင်ငံ ၅၄ နိုင်ငံရှိသည်။ သူတို့တွင် O.I.C ဟုခေါ်သော အဖွဲ့ အစည်းရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်သော အာဖရိက ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ရှိ အာဆီ ယံအဖွဲ့ ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကုလ္လသမဂ္ဂတွင် သူတို့၏ စုစုပေါင်းအင်အားမှာ ၁၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။ သူတို့ လို ချင်သောပုံစံကို အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် အပေးအယူလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခုခုတွင် မူဆ လင် လူနည်းစုတို့ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရသည်ဟု သတင်းဖြစ်ပွါးလျင် ကုလ္လသမဂ္ဂရုံးကြီးပင် တုန်လှုပ်သွားရ အောင် သူတို့ကလှုပ်ရှားလေ့ရှိသည်။
ယနေ့ ခေတ်ကာလတွင် ကုလ္လသမဂ္ဂမှကြီးမှူး၍ ဖွဲ့စည်းထားသော ကုလ္လသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံး က ရှိနေသည်။ ယင်းသည် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွါးရာဒေသအထိ ကွင်းဆင်းကာ ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းရုံမက အတော်ကြာ သည်အထိ ယင်းဒေထွန်းတွင် င်ရောက်စောင့်ကြပ်ပေးသည်။ ဥပမာ-ရိုဟင်ဂျာ၊ ဘော့စနီးယားကိစ္စကိုကြည့်ပါ။
ဤဖော်ပြပါ အချက်များသည် ကျွန်တော်တို့၏ ရိုးသားလှသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိရှိရန် ဖော်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူများမြှောက်ပေးတိုင်းလိုက် ''က'' လျင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသာလျင် ပြိုကွဲပျက်စီးရမည် မလွဲဖြစ် သည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးပြုရမည့် အချက်သည်ကား နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး၊ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး မပြိုကွဲရေးပင်ဖြစ်သည်။
''အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ရ'' စာတမ်းတွင် အချို့သော အချက်အလက်များသည် မူဆလင်တို့ကို စိတ်ဓာတ် တက်ကြွရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ အခွင့်အရေးတောင်းရန် တဖက်မှ လှုံ့ဆော်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ဗြိတိသျှ အစိုးရလက်ထက်မှစ၍ ယနေ့အထိ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ် ဘာ သာဝင်တို့သည် ၃.၈% ရှိသည်ဟု သိရသော်လည်း ''မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ'' တွင်မူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဦးရေသည် ၂၀ % ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍ ၅၀ % သို့ရောက်လာလျင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို ဤနိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသကဲ့သို့ သက္ကရာဇ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မူဆလင်တွင်သည် ဟိန္ဒူများ ကို ကျော်သွားလိမ့်မည်ဟု ရေးသားထားသည့် ပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေသည်။ အချို့ အချို့သော စာရင်းဇယားများ သည် နိုင်ငံတော်၏ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်များဖြစ်၍ ပြင်ပသို့ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိပါ။ ယင်းအချက်ကို စာ တမ်းပြုသူများ တကယ်ပင် နားမလည်ကြခြင်းလော။ သို့တည်းမဟုတ် နားမလည်ချင်ယောင် ဆောင်နေသ လောဟု စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်။ နိုင်ငံရေး အနှောက်အယှက် ပယောဂမကင်းဟု ယူဆရမည်ပင်။
ဤကဲ့သို့သော ရေးသားချက်၊ ထိုးနှက်ချက်များကြောင့်ပင် ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံသည် ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ဘော့စနီး ယားနိုင်ငံ၊ တဖန် ကိုဆိုဗိုကို ခွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ယူဂိုဆလပ်နိုင်ငံ ပြိုကွဲရခြင်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ဆာ့ဗ်တို့၏ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုသည်မှာ ယင်း နိုင်ငံ၏ နယ်နမိတ်အတွင်း နေထိုင်သူများ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ပြည့်ဝမှုနှင့်ဆိုင်သည်။ ယ နေ့ခေတ်ကာလတွင် မည်သည့်လူမျိုးမှ အခြားလူမျိုးကိုကျွန်ပြု၍မရနိုင်ပါ။ သို့ပါ၍မေတ္တာဝါဒီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ နောင်တော်ကြီးစိတ်ဓာတ်မွေးမြူကာ လူမျိုးစုညီငယ်လေးများကို သနားညှာတာသွားမည်ဆိုပါလျှင်မူ လူမျိုးစု ငယ်များသည် အစ်ကိုကြီးနောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်ပါသွားမည်မှာ မုချအမှန်ပင်ဖြစ်သည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုရှိနေသော မူဆလင်များသည် ဗမာလူမျိုးကိုမှ ပို၍အထင်ကြီးကြသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း ဗမာကဲ့သို့ ဝတ်စားနေထိုင်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူကြသည်။ သူတို့ကို ကုလားခေါ်ခြင်းထက် မြန်မာမူဆလင်ဟု ခေါ် ခြင်းကို နှစ်သက်ကြသည်။ ဗမာတို့ကဲ့သို့ တိုက်ပုံကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဗမာတို့ကဲ့သို့ သူတို့ဘာသာအမည် အီ စွတ်၊ ကာဆင်နှင့်ဆက်ပြီး ကိုတင်မောင်၊ ကိုခင်အောင်ဟု ရေးသားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ယင်းသူတို့သည် ဗမာလူမျိုး၏ နောက်ဆက်တွဲ အင်အားဖြစ်လာသည်။
ပြည်နယ်များတွင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ အစိုးရကသူတို့၏ ဦးရေကို ဗမာလူမျိုးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြကြသည်။ မိမိတို့ကို ခင်တွယ်သောသူတို့တွင် မကောင်းသောလက္ခဏာများ ရှိသလားဟု မေးစရာရှိ သည်။ သူတို့သည် မူးယစ်ထုံထိုင်းစေသော အရက်သေစာများကို ရောင်းချခြင်းမရှိ။ သူတို့သည် ဘိန်းဖြူကဲ့ သို့ မကောင်းသော အလုပ်များကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခြင်းလည်း မရှိ။ စီးပွါးရေးတွင် Monopoly ဟုခေါ် သော ထိပ်ပိုင်းမှ ချုပ်ကိုင်ခြင်းလည်းမရှိ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောကြသေးသည်။ ယနေ့ကာလ တွင် ကုလားမများကို အခြားသူတို့ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးကောက်သကဲ့သို့ ဗမာအမျိုးသမီးများကိုလည်း ကုလားများကယူကြသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းအိမ်ထောင်ရေးသည် ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းမရှိကြောင်းကို နှစ်ဖက် စလုံးက သိကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ သဘောတူအချင်းချင်းသာယူကြရေးကို အထူးပြုနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ယနေ့ ခေတ်ကာလသည် လွတ်လပ်ရေးရပြီး နစ် ၆၀ ကျော် ကာလဖြစ်သည်။ ကုလားများသည်လည်း မူလ ကုလားများနှင့် မတူတော့။ ဗမာလူမျိုးတို့နှင့်မခြား စိတ်ဓာတ်နှင့် ရုပ်ရည်တူလာသည်။ ကျွန်တော်တို့ လျှို့ဝှက် စွာလုပ်ဆောင်သော ကိစ္စများကို သူတို့အားလုံး သိနေကြသည်။ သူတို့၏ ရုပ်ရည်သည် ဗမာနှင့်တူသည်။ အ ထက်အညာဒေသရှိ မူဆလင်များမှာသာ၍ပင် ဗမာများနှင့် ခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။ အရေးကြီးဆုံး အချက်မှာ သူ တို့အတွင်း မြန်မာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ပေါ်ထွန်းနေရန်သာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတလျှောက် ဗျတ်ဝိ၊ ဗျတ္တမှ အစ ဆရာကြီး ဦးရာဇက်အဆုံး သူတို့သည် ဗမာလူမျိုးတို့နှင့်အတူ သွေးစည်းညီညွတ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံကို သစ္စာဖောက်သည်ဟူသော အစဉ်အလာဆိုးသည် သူတို့တွင် မရှိခဲ့ကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံရဲရပါမည်။ စွန့်စားခြင်း ဝါသနာပါ၍ ဖိနှိပ်မှုကို အလူးအလဲခံခဲ့ရသည်။ သူတို့တွင် မျိုးချစ်စိတ်မရှိလျင် သူတို့သည် တရုတ် များကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှ တသီးတခြားနေမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မူဆလင်များဖြစ်လာသည့် နည်းတူပင် မူဆလင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသူများလည်း အများ အပြား ရှိသည်။ ထင်ရှားသော သူများကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြရလျင် သခင်ဘသောင်း၊ ဦးသန့်၊ ဒဂုဏ်ဦးဘတင်၊ ဘကြီးဘဖေ၊ ဒေါက်တာမောင်ဒီ၊ ဦးဘသန်းထက်၊ တေးသံရှင် အလီ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်ဆွေ၊ ရွှေဘ၊ ချိုပြုံး၊ မေဝင်းမောင်၊ ကျော်သူ၊ စသည်ဖြင့် ရုပ်ရှင်လောကမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စစ်ဖက်နယ်ဖက် အနုပညာလောကမှ ထင်ရှား သော ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့က လူမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်သောကရှိသကဲ့သို့ မူဆလင်များသည်လည်း ဤကိစ္စကို သောကထားကြသည်ပင်။
ဗမာအမျိုးသမီးကိုယူလျင် ဘယ်၍ ဘယ်မျှပေးမည်ဟူသော ရေးသားဖော်ပြချက်သည် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူဆ လင်တို့၏ အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ပြီးမှ မှတ်ချက်ချသင့်သည်။ မူဆလင်များသည် ဗမာလူမျိုးနည်းတူ ချမ်းသာသူများသလို၊ လူလတ်တန်းစားလည်း ရှိသည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ အထောက်အပံ့များ ရမည်ဆို လျင် မူဆလင်တို့၏အခြေအနေသည် တရုတ်လူမျိုးသာသာ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ မြို့သစ်များနေ ဆင်းရဲ စုတ် ပြတ်နေသော မူဆလင်များက ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းမပေါ်တွင် ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေပုံ မြင်ကွင်းကပင်လျင် ယင်းသူတို့၏ အခြေအနေမှန်ကို သိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ယင်းသို့သောဝါဒ ဖြန့်ချီချက် များသည် မုန်းတီးရေး ကို ဦးတည်၍သာဖြစ်၍ ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်သူအဖို့ လက်ခံနိုင်သောအခြေအနေပင် မရှိနိုင်ပါ။
''အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ'' စာတမ်းကြောင့် ကြီးမားသောပဋိပက္ခနှင့် အကြပ်အတည်းကိုသာ တွေ့နိုင်ပါ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူဆလင်များကို စောင့်ကြပ်သော အရှေ့ဖျားဒေသ မူဆလင်အသင်း ရှိနေသည်။ ကမ္ဘာ့မူဆလင် အဖွဲ့ကို ဆော်ဒီရှိ ဂျစ်ဒါမြို့တွင် ရုံးချုပ်ထားရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် အဖွဲ့သားအားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မူဆလင်များအရေးနှင့်စပ်လျင်း၍ မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့က တာဝန်ယူရသည်။ ယင်းအဖွဲ့ အစည်းများသည် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သလို အကြမ်းဖက်သမားများကို သင်တန်းပေးသော အဖွဲ့၊ လက်နက်ပေးသောအဖွဲ့စသည်ဖြင့် တရားမဝင်ဖွဲ့ထားသောအဖွဲ့များလည်း ရှိသည်။ အရေးကြုံက သူတို့ က လက်မနှေးကြပေ။ ယင်းအဖွဲ့များကို အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရန်နှင့် လစ်ဗျားတို့က အထူးအားပေးသည်။
မြန်မာမူဆလင်များ၏ ပလီဝတ်ကျောင်းများ ကျူးကျော်ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ ရွာငယ်များနှင့် ၎င်းတို့ အိမ်ယာများ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးအရ နှိပ်ကွတ်ခံရခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာမူဆလင်များမှ လက် နက်စွဲကိုင်ကာ သူတို့၏ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသည့်နည်းလမ်းကို မသုံးစွဲသည့်အတွက် အာဖဂန်ရှိ အိုမောက '' မြန်မာမူဆလင်တို့သည် သူရဲဘောကြောင်လွန်းသည်'' ဟု ဗျူးခန်းတွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူဆလင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တို့သည် အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်ကို ရွံရှာသူ များ ဖြစ်ပုံရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်အသီးသီးတွင်ရှိခဲ့သော သောင်းကျန်းသူတို့ကြောင့် တိုင်းပြည် ဆုတ် ယုတ်လာပုံကို မြန်မာမူဆလင်တို့ သိသည်။ မုန်းတီးမှုနှင့် ပြုစုထားသော ''မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ရ'' လမ်း ကြောင်းသည် မလွဲမသွေပင် ယင်းအနိဌာရုံသို့ တွန်းပို့နေသည်။ ယုတ်စွအဆုံး မူစလင်တို့သည် ပဋိပက္ခကို ရှောင်ရင်းနှင့် ဒေသတခုဝယ် စုမိသွားကြလိမ့်မည်။ ယင်းဒေသသည် အနာဂတ်၏ ဘော့စနီးယားနှင့် ကိုဆိုဗို ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဤလမ်းကြောင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြရပါမည်။ သို့မှသာလျင် နိုင်ငံတော်ကြီးသည် တည်တံ့ခိုင်မြဲမည် ဖြစ်သည်။
ပြင်ပမှသွေးထိုးပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သူတို့နိုင်ငံတွင် မကြာခဏဖြစ်ပွါးလေ့ရှိသော သွေးချောင်းစီးမှုများကို မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ပေါ်ပေါက်စေလိုကြသည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အိန္ဒိယမှလာပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို တရားဓမ္မ ပို့ချသယောင်၊ ကမ္မဌာန်းတရား ပို့ချသယောင် အတိတ်က မူဆလင်နှင့် ရန်ငြှိုးများကို ကလဲ့စားချေ ခြင်းဖြစ်သည်။
အချို့သင်္ကန်းဝတ် ဘုရားသားတော်များပင် ဤကိစ္စတွင် လက်ဝင်နေကြခြင်းက မေတ္တာအရင်းခံ ဗုဒ္ဓဝါဒကို ပိုပြီး ရုပ်ဆိုးစေပါသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ၏ အစဦးကာလတွင် သိန်းပေါင်းများစွာသော ဟိန္ဒူကုလားများသည် သူတို့နိုင်ငံကို ပြန်ခဲ့ကြသည်။ စက်ရုံများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရသည်။ ထို တရားဓမ္မ ပို့ချသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ စက်ရုံသည်လည်း ပြည်သူပိုင်စာရင်းဝင်ဖြစ်သည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။ သူ၏တပည့်များဖြစ်သော ပါရဂူ နှင့် နှစ်ဖက်လှတို့မှာ ဆရာကြီး၏ပေးကမ်းမှုအပေါ် မူတည်နေ သံယောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗာရာဏသီ ဟိန္ဒိူတက္ကသိုလ်မှ ဆင်းလာသူလည်းပါပြီး ဟိန္ဒိူဘာသာဝင်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ကို သူတို့၏ ဘုရားဝင်စားသူအဖြစ်လောက်သာ လက်ခံခြင်းသာလျင် ပြုသည်ကိုလည်း သတိချပ်ပါ။
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်သည်ကား နိုင်ငံတော်အစိုးရက ပံ့ပိုးနေသော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ထွန်းကားရေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
Ebook အနေနှင့်- (တခြား ရှင်းလင်းချက်များပါ ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်)
တိုက်ရိုက်ဖတ်ရန် လင့်ခ် (၁)
တိုက်ရိုက်ဖတ်ရန် လင့်ခ် (၂)
Posted by A Muslim at 11:39 PM
နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ April 24, 2012 at 9:45 PM
A Muslim May 2, 2012 at 7:55 PM
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဖော်ပြပါ ပိုတ်စ့်ဟာ ရောင်ခြည်ဦးရဲ့ ပိုတ်စ့်လေးပါ... တဆင့် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်... ဆီးရီးယား...ဆူဒန်...လစ်ဗျား....ကင်ညာ....အာဖဂန်...ပါလက်စတိုင်း....မင်းတို့ကုလားတွေချည်းပဲ....
သတ်နေဖြတ်နေကြတာ ဆိုတော့ အဲဒီနိုင်ငံတွေက ဘာအတွက် ဒီလိုမျိုး သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်နေကြပါသလဲ?
သူတို့က သွားကျူးကျော်နေကြလို့လား? သူတို့က ကျူးကျော်ခံနေရတာ လား? ဗီယက်နမ်ကို အမေရိကန်စစ်ဖြစ်တော့ ဗီယက်နမ်ဖက်က ခုခံ ကြတာဟာ ဗီယက်နမ်တွေက အစွန်းရောက်နေကြလို့လား?
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို နယ်ချဲ့တွေ သိမ်းပိုက်တော့ ပြန်လည် ခုခံ တိုက်ပွဲဝင်ကြတာ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အစွန်းရောက်သမားတွေ ဖြစ်နေ ကြလို့လား?
မိတ်ဆွေပြောခဲ့သလိုပဲ ခံစားချက်နဲ့မကြည့်နဲ့....ဦးနှောက်ကိုနဲနဲလေးချဲ့ပေးလိုက် လို့ ပြန်ပြောပါရစေ..
Ko Naing November 29, 2012 at 7:46 AM
မွတ်ဆလင် ဘလောဂါ ဌေးလွင်ဦး တို့ ကျော်ကျော်ဦး တို့လိုအတို့ထောင်ကောင်တွေ ကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းက မွတ်ဆလင်တွေ ပိုနာရမယ်မှတ်ပါ တခြားဘာသာတွေကို စော်ကားတဲ့စာတွေ ဒင်းတို့ထဲမှာအများကြီးဘဲ
ဖတ်လိုက်ရင် ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ တကယ်တမ်း စောင်းရေးထားတာပါ။ မသိမတာလေး ဒီနည်းတွေချည်းပါပဲ
Arakan Mp3, Mp4 Collection February 6, 2014 at 2:14 AM